Casa de la Val, Ụlọ nke ndagwurugwu - Andorra la Vella
Europe Andorra Andorra la Vella
Adreesị: Carrer de la Vall, 28 - AD 500, Andorra la Vella, Andorra
Ekwentị: + 376 829 129
Fax: +376 869 863
Ụbọchị a rụrụ: 1580
Owuwu nke nzuko omeiwu oge ochie Casa de la Val (nke a sụgharịrị n'asụsụ Catalan dị ka "Ụlọ nke ndagwurugwu") bụ otu n'ime ụlọ ndị kachasị ochie nke isi obodo nke Andorra, Andorra la Vella, nke dị n'etiti ya. Ewuro ya na 1580 site n'usoro nke ezi ezinụlọ nke Buketts. Kemgbe ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ atọ ebe a, ndị omeiwu nwere nzukọ ruo mgbe e zigara ya n'ụlọ ọhụrụ.
Ihe dị iche iche nke ọdịdị ahụ dị na njikarị ọrụ ya: ndị njem na-eju anya ịmata na n'èzí na steeti ahụ, e nwekwara ụlọ nkwari akụ, ụlọikpe, ụlọ mkpọrọ na ụlọ ụka San Ermengol. N'otu oge ahụ, e kenyere ụlọ mkpọrọ ahụ ndị omempụ kachasị mkpa, ma ọ bụghị onye ọ bụla mara ikpe ka etinye ya na ya.
Mpụ na ime
N'ile anya, Casa de la Vall dị ka ụlọ elu ochie ma ọ bụ ụlọ ahịa na-ejide aka ma na-ejide ya, na-emepụta echiche dị mma ma dị egwu. Ihe maka mgbidi ahụ bụ nkume siri ike na nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na edobeghị ya. Ndị na-edepụta ụgbọ ahụ adịghị achọpụta na ọ dị mkpa iji ụlọ ihe ịchọ mma chọọ ụlọ ahụ mma, ya mere ụlọ elu dị elu na-eme ka ọdịdị ya dị elu, nke ụlọ elu dị elu kwadoro ya. Na oge ochie, ọ na-arụ ọrụ ma ụlọ ọrụ sentinel na ụlọ kpalakwukwu. Ọ dị ịrịba ama na ụlọ nsọ nke Casa de la Val na-eji uwe agha na ọkọlọtọ nke mba ahụ chọọ ya mma - akụ bara ụba.
Ihe owuwu ahụ nwere ntọala dị elu na ala atọ. N'ogige dị nso na facade e nwere ihe osise mara mma nke na-egosi agba egwú nke mba.
Ime ụlọ ahụ enweghị ike ịnya isi maka okomoko. N'ụlọ ndị isi, ị ga-enwe mmasị na frescoes oge ochie nke narị afọ nke 16 na oriọna ọlaọcha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ahụ. A na-ejikarị oche ndị dị mfe dị n'akụkụ mgbidi na-arụ ọrụ ahụ.
Ụlọ dị n'ihu nke ụlọ ahụ na-egosi uwe nke ogwe aka nke asaa nke (Andorra) na ihe nnọchianya nke mba ahụ, nke nwere ọnụ ntụ, onye ọrụ nke Bishop nke Urcal na Catalonia na ehi abụọ na-anọchite anya Spain na France. N'ala ala ihe ị ga-ele ga-abụ Ụlọ Akwụkwọ San Ermengol na Ụlọikpe Ikpe ziri ezi maka ikpe ikpe ụlọ ikpe. E nwekwara kichin mara mma nke nwere arịa ndị ochie a magburu onwe ya.
Ụlọ Nzukọ Alaeze na-arụ ụlọ nke abụọ, ebe a na-enwe nnọkọ nnọkọ omeiwu. Ihe omuma ya bu okpu nwere 7 nkpuchi, iji chekwaa akwukwo di mkpa. A machibidoro mkpuchi ahụ ka ọ bụrụ na ndị nnọchianya nke ọ dịkarịa ala otu n'ime asaa ahụ anọghị na nzukọ ahụ. N'otu oge ahụ, ha na-abanyekwa n'otu ụlọ nzukọ ahụ n'otu oge, na-emeghe ọkpụkpọ asaa ọ bụla n'ime ụlọ. Ugbu a, n'ala nke abụọ, e nwekwara akwụkwọ ngosi Mail, bụ ebe e depụtara nnukwu akara nke stampụ.
Ị nwere ike ịga na Casa de la Val site awa ndị na-eso (Mee ruo October):
malite na Tuesday ruo Saturday - site na elekere 10 nke ụtụtụ ruo elekere 2 na elekere 3 ruo elekere isii nke ụtụtụ;
na Sunday na ememe ụlọ ahụ na-emeghe site na elekere 10 nke ụtụtụ ruo elekere abụọ nke ụtụtụ;
Monday bụ ụbọchị ụbọchị.
Site na November ruo April, a na-emechi Ememe Ndagwurugwu na Monday, kamakwa na Sunday, na site na July 15 ruo Septemba 15, ọ na-arụ ọrụ ụbọchị asaa n'izu site na 7:00 ruo 19:00.
Otú ọ dị, ịbanye n'ụlọ ahụ nwere n'efu maka onye ọ bụla, Otú ọ dị, maka ileta Museum nke Post ọ dị mkpa ịkwụ ụgwọ 5 ma ọ bụ 2.5 euro (tiketi ụmụ). Ogologo oge elekere elekere nke ụlọ ahụ na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị na Spanish, Catalan, English na French.
Iji nweta ụlọ ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye n'ụgbọala obodo ahụ, nke na-agba n'ime isi obodo, ma ọ bụ site na taxi, nke a ghaghị ịde akwụkwọ tupu oge agaa: n'okporo ámá ị gaghị achọta ya.
Kedu ihe ọzọ ị ga-ahụ?
Ọ bụghị n'ebe dị anya site na Ndagwurugwu Ndagwurugwu dị ebe ahụ dị ka:
Sala de la Giusticia (ụlọ ụlọ ikpe);
Ụlọ ọrụ Royal Coin
Ụlọ Nzukọ (Bruges)
Katidral nke Palma
Ụlọ Turkish nke Kaitaz
Oghere Ndị Ndagwurugwu
Ụlọ ihe nkiri nke Music
Na-ekiri ụkwụ n'ikiri ụkwụ
Kombucha - esi esi elekọta na iji mee ka ahụike na ịma mma dị mma?
Ụmụ okorobịa Jeans 2013
Nke mbụ ezé n'ime nwatakịrị bụ ihe mgbaàmà
Echepụta Khrushchev nke ụlọ abụọ
Yellow feces na nkịta
Kedu ihe onu oriri - ihe kpatara na ụzọ nke ịlụ ọgụ
Gwa na mpi
Cystitis na ọbara
Burdock - na-agwọ ọrịa na iwu eji
Nkume mmanụ - ngwa
Ụdị fences na fences
Pomp maka isi mmiri ahụ
Karịa iwepụ stains si ajirija na uwe?
Ezigbo mmasị banyere Great Britain
Mkpụrụ ọka Strawberry
Kanzashi - ntutu isi
Ekpere nke nwanyi di ime
Afọ Ọhụrụ na Ịtali
Jikwa akwa olu
Anya ugogbe anya nke umu nwanyi 2017 - olee ụdị ejiji kwesiri itinye na oge ohuru?
Akwa akpụkpọ ụkwụ na - agba chaa chaa nke ọma
Giardiasis na ụmụaka